Sahamiyayaal Yaryar Daryeelka Carruurta | Waxbarshada Beesha Minnetonka
Junior Explorers-ka waxaa kafaala qaaday inkasta oo Minnetonka Bulshada Waxbarshada waxayna siisaa barnaamij daryeel cunug tayo sare leh oo loogu talagalay carruurta da'da dugsiga barbaarinta ah. Shaqaalaheena aqoonta sare leh, badankooduna yihiin rukhsad aqoonyahano shati leh, waxay hubiyaan in howlaha oo dhami ay ku habboon yihiin da'da yar waxayna bixiyaan isku dheelitirnaanta ciyaarta iyo qaabdhismeedka qaabdhismeedka. Carruurtu waxay waqti la qaataan asxaabtooda waxqabadyada sida dhageysiga sheekooyinka, abuurista farshaxanka iyo mashaariicda sayniska iyo ku ciyaarista bannaanka.
Sahamiyayaasha Yaryar waxay furan yihiin 6:30 subaxnimo ilaa 6 galabnimo maalin kasta oo maalmaha shaqada waxayna u baahan yihiin ugu yaraan laba maalmood oo daryeel ah. Fadlan ogow in carruurtu ay tahay in loo tababaro musqusha si ay uga qayb galaan Junior Explorers.
Sahamiyayaal Yaryar oo loogu talagalay Dugsiga barbaarinta Minnetonka
Waxaad dooran kartaa inaad isku darto daryeelka carruurta iyo dugsiga barbaarinta ee Minnetonka, ama aad ku qorto ilmahaaga (carruurtaada) kaliya Jiilayaal Yaryar. Isku darida xanaanada caruurta ee Minnetonka iyo Junior Explorers ayaa ah ikhtiyaar aad u fiican qoysaska raadinaya xanaano caruureed oo tayo sare leh iyo barnaamij heer caalami ah oo dugsiga barbaarinta ah. Shaqaaluhu waxay raacaan carruurta inta udhaxeysa barnaamijyada waxayna hubiyaan in marwalba la kormeero.
Ku soo duub waxqabadyada Community Ed maalinta ilmahaaga
Waxbarshada Beesha ee Minnetonka waxay bixisaa nashaadaadyo kaladuwan oo kobcin iyo madadaalo ah oo lagu soo koobi karo ilaa maalinta ilmahaaga ee Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka (MCEC). Cunugaagu wuxuu tagi karaa dugsiga barbaarinta, wuxuu qaadan karaa qoob-ka-ciyaar, jimicsi, muusig ama fasal luqadeed wuxuuna aadi karaa daryeelka carruurta ee Junior Explorers - dhammaantoodna waxay u dhexeeyaan soo-dejinta iyo soo-qaadista! Shaqaalaheennu waxay raaci doonaan carruurta inta u dhexeysa waxqabad kasta si loo hubiyo beddel ammaan ah, oo kormeer ah.
Waxaan ka codsaneynaa waalidiinta inay caruurtooda ka qoraan Baarayaal jadwal isdaba joog ah, labo ilaa shan maalmood, isla waqtigaasna lagu kordhiyo todobaad kasta ugu yaraan afar todobaad. Isbedelada jadwalka qoyska waa in lagu sameeyaa qoraal ama koontadooda Eleyo ugu yaraan hal usbuuc ka hor inta aan wax ka beddel lagu sameyn inay dhaqan gasho. Codsiyada waa la ansixin doonaa iyada oo loo eegayo boos banaan oo waxaa jiri doona $ 10 ujro ah canuggiiba isbeddel kasta.
Ku darida maalin jadwalkaaga waa ikhtiyaar. Ku darista waxaa lagu ansixin doonaa qaab banaan oo u baahan una baahan 24-saac ogeysiin horumarsan. Qiimaha Add-a-Day ayaa lagu dabaqayaa.
Xulashada Daryeelka Carruurta Jadwalka Xusuusin
Dugsiga barbaarinta kahor
Waxaa ku jira cunto fudud oo quraac ah
Dugsiga barbaarinta ka dib
Waxaa ku jira cunto fudud galabtii oo caafimaad leh
Dugsiga barbaarinta ka soo horjeedda
6:30 subaxnimo 12:30 galabnimo.
ama 11:15 a.m.-6p.m.
Waxaa ku jira cunto fudud oo quraac ah.
U dir qado bac ah maalin kasta.
Maalin badhkeed AM
Maalin badhkii PM
Waxaa ku jira cunto fudud oo caafimaad leh.
Daryeel maalmo marka ilmahaagu aanu ku jirin dugsiga barbaarinta.
Waxaa lagu dari karaa fasalo kale ama waxqabadyo Ed (sida Tonka Dance Academy, Music, iwm).
Daryeel ayaa la heli karaa marka iskuulka uusan ku jirin fasalka.
Waa inuu jiraa 4 sano illaa Juun 1.
Sideen iskaga diiwaangeliyaa Baadhayaal Yaryar?
Ilmahaygu ma xaadiri karaa sahamiyayaal yar yar maalin aan si joogto ah loo qorsheynin (ku dar maalin-kasta)?
Sideen u bedelaa jadwalka Jilayaasha Yaryar ee ilmahayga?
Waxbarshada Beesha ee Minnetonka waxay Eleyo u isticmaashaa isdiiwaangalinta fasalada Waxbarshada Beesha, oo ay kujiraan Junior Explorers Dhammaan diiwaangelinta Junior Explorers waxaa lagu sameeyaa websaydhka Eleyo. Eleyo waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku maamusho jadwalkaaga Sahaminta khadka tooska ah, iskuna diiwaangeli dhamaan maalmaha aan iskuulka aheyn, isla mar ahaantaana ku bixiso kaarkaaga deynta / deynta ama koontada jeegga / keydinta, eegida iyo qaansheegatooyinka daabacan, canshuurta daabacan iyo rasiidhada daryeelka ku tiirsan sanadka oo dhan farriimaha qoraalka ah.
Adoo adeegsanaya tillaabooyinka hoose, waxaad u abuuri doontaa koonto naftaada iyo astaan dhammaan xubnaha qoyskaaga. Kadib waad iska qori kartaa Junior Explorers. Nidaamkani waa inuu qaataa ugu yaraan 25 daqiiqo in la dhammaystiro.
Marka hore koonto u samee naftaada ka dibna u samee astaan astaan u leh ilmahaaga. Guji xiriiriyahan: https://minnetonka.ce.eleyo.com oo isticmaal tillaabooyinka hoose.
Eleyo Soo Gal iyo Dejin
Soo gal goobta adoo aadaya: http://minnetonka.ce.eleyo.com . FIIRO GAAR AH: Eleyo waxay sida ugu fiican u shaqeysaa markaad isticmaaleyso biraawsarka Google Chrome.
Xullo qeybta kore, midig ee shaashadda. Haddii aad horey u leedahay Eleyo Account, geli emaylkaaga iyo eraygaaga sirta ah si aad u gasho oo aad ugu booddid Diiwaangelinta Baadhayaasha iyo / ama Jaajuusayaasha Yaryar ee hoose. Haddii aadan laheyn xisaab, waxaad u baahan doontaa inaad mid sameysato adigoo dooranaya Saxiix.
Buuxi Diiwaanka Foom Xisaab Cusub ah oo xulo Abuur Xisaab. Fadlan ogow: Koontada waa in lagu sameeyaa magaca waalidka.
Marka xigta, gal adoo adeegsanaya cinwaanka emaylkaaga iyo lambarkaaga sirta ah. FIIRO GAAR AH: E-mayl ayaa laga soo dirayaa Eleyo oo leh xiriir si loo hubiyo koontadaada.
Markaad gasho, xulo Maareynta Xiriirka dashboardka si aad ugu darto xubin qoyskaaga ah.
Xullo Ku dar Xubin Qoys / Xiriir si aad ugu darto xubnaha qoyska. Haddii aad haysato cunug da'diisii hoose tahay, ka dooro darajada cunuggaaga liiska hoos u dhaca ka dibna ka dooro kan hadda (ama sannad-dugsiyeedka soo socda ee ku xiran goorta aad is-diiwaangelineyso) ee Sannad Dugsiyeedka hoos u dhaca si aad u muujiso darajada ilmahaaga. Haddii ilmahaagu da 'dugsi-horaadka da' yahay, waxaad dooran doontaa Xannaanada iyo sannadka ay bilaabi doonaan Xanaanada.
Xullo Abuur Qof si aad u dhammaystirto astaanta. Kudar dhamaan xubnaha qoyska.
Ka dib markaad dhamaysato sameynta koontadaada oo aad u sameyso Profile cunuggaaga, waxaad dhameystirtay nidaamka dejinta Koontada waxaadna diyaar u tahay inaad iska diiwaangeliso nidaamkayaga.
Diiwaangelinta Baadhayaasha Yaryar
Ka soo qaad shaashaddaada, ka Baadh Dhammaan Barnaamijyada ku yaal dhinaca midig ee geeska midig, ka dibna dooro Daryeelayaasha Carruurta ee ay sahamiyaan oo ka xulo Diiwaangelinta.
Xullo cunugaaga liiska bidixda. Ka dib markaad hubiso macluumaadka ilmahaaga, dooro Fiirinta Fiican, Bilow Diiwaangelinta.
Kudar ugu yaraan 3 xiriiro deg-deg ah oo loogu talagalay koontada ilmahaaga oo xulo Continue.
Fadlan akhri oo ku heshii Shuruudaha iyo Xulashada oo xulo Continue.
Xullo taariikhda cunugaaga uu bilaabayo iyo maalmaha usbuuca ay xaadirayaan doorona Continue.
Marka xigta, ka jawaab dhammaan su'aalaha oo xulo Su'aalo Dhameystiran oo Ku sii soco qaybta hoose ee bogga.
Kudar Habka Lacag Bixinta ee keydsan oo geli macluumaadkaaga lacag bixinta. Fadlan ogsoonow: Lagama qaadi doono lacagta diiwaangelinta illaa heshiiskaaga la oggolaado, badiyaa 2-3 maalmood. Kadib, xulo Diiwaangalin Buuxda.
Waxaa laguu horseedi doonaa bogga xaqiijinta. Haddii aad rabto inaad isdiiwaangaliso maalmaha aan iskuulka ahayn waqtigaan, xulo Diiwaangalinta Maalmaha Aan Dugsiga Ahayn. Maalmaha aan iskuulku jirin ayaa la ansixin doonaa iyada oo ku dhow taariikhaha maalinta aan dugsiga ahayn. Waxaad sidoo kale boggan ka diiwaangelin kartaa cunug kale oo loogu talagalay Baadhayaasha / Da'yarta Yar.
Waxaad heli doontaa emayl xaqiijinaya jadwalkaaga oo ku ogeysiinaya in qandaraaskaagu sugayo dib u eegis. Marka shaqaalaheennu ay ansixiyaan jadwalka, waxaad heli doontaa emayl kale oo wata xaqiijin. Fadlan ogow: Inta lagu jiro sanad-dugsiyeedka, waad beddeli kartaa jadwalkaaga wakhti kasta; si kastaba ha noqotee, isbeddelada waa in la sameeyaa ugu yaraan shan maalmood oo iskuulka ka hor taariikhda isbeddelka la hirgaliyay oo lagu aqbalaa boos banaan.
Xilligan carruurta Junior Explorers ka diiwaangashan waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay xaadiraan maalmaha aysan iyagu hadda isqorin. Daryeelka waxaa lagu heli karaa boos bannaan oo bannaan. Codsiyada waa in loo sameeyaa kormeeraha goobta ugu yaraan 24 saac kahor. Ka noqoshada ah Add-a-day waa in la helaa ogeysiis 24-saac ah ama lacag-bixinno ayaa la adeegsan doonaa. Fadlan soo wac goobta ilmahaaga adoo codsanaya.
Lambarka Telefoonka Goobta Baadhayaasha Yaryar: 952-401-6825
Qoysasku waxay codsan karaan in wax laga beddelo jadwalka ilmahooda wakhti kasta iyada oo loo marayo Eleyo. Fadlan xusuusnow in shan maalmood oo shaqo loo baahan yahay si jadwalka loo beddelo.
Fadlan ogow: Eleyo waxay ku tilmaamaysaa jadwalka ardayga inay tahay "Qandaraaska Ardayga."
Gal bogga www.minnetonka.ce.eleyo.com . Fadlan ogow: Eleyo waxay sida ugu fiican u shaqeysaa markaad isticmaaleyso biraawsarka Google Chrome.
Xulo Baadh Dhamaan Barnaamijyada.
Xullo Arag Dashboardkaaga.
Xisaabtaada, hoosta ka xulo xisaabtaada Daryeelka Ilmaha.
Sida ku xusan Qandaraasyada hadda socda iyo kuwa soo socda, dooro qandaraaskaaga hadda.
Xullo Jadwalka Beddelka.
Xulo jadwalkaaga cusub oo dooro Gudbi Isbeddelada Jadwalka Qandaraaska.
Haddii aad raadineyso Maalin-ku-dar, taas waxaa lagu sameyn karaa adiga oo si toos ah uga wac xafiiska Junior Explorers 952-401-6825.
Immisa ayey ku kacaysaa Baadi-baarayaasha Yaryar?
Caawinta waxbarashada ma loo heli karaa Baadhayaasha Yaryar?
Sidee biilku ugu shaqeeyaa Sahamiyayaal Yaryar?
Sideen lacag ugu sameeyaa Baadhayaasha Yaryar?
Sideen u cusbooneysiiyaa mushaarkayga otomaatigga ah ee Sahmiyeyaasha Yaryar?
Ma jirtaa amaah lagu siinayo jirro ama maqnaanshaha Baadhayaasha Junior?
Sideen ku helaa nuqullada qaansheegtayda?
Ma heli karaa soo-koobid dhammaadka sannadka ah ee lacag-bixiyeyaashayda?
Ka-saarista Baadhayaasha sababo la xiriira COVID 19
2020-21 Sanad Dugsiyeedka Baadhayaasha Da 'yar (da'da 3-5)
Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka Maalin kasta Kudar-maalin
Maalin badhkeed (6:30 am-12: 30 pm) $31.40 $32.40
Maalin badhkeed (duhurkii-6 galabnimo) $31.40 $32.40
Maalin buuxda (6:30 am-6 pm) $56.50 $58.50
Sanad Dugsiyeedka 2020-21 Sannad Dugsiyadeedka Yaryar ee Dugsiga barbaarinta Minnetonka (da'da 3-5)
Kahor intaanan dugsiga barbaarinta (6: 30-9 am) $14.85 $15.85
Gelinka dambe dugsiga barbaarinta (3-6 galabnimo) $14.85 $15.85
(6:30 am-12: 30 pm ama 11:15 am-6 pm) $31.40 $32.40
* Waqtiga diiwaangelinta waxaa laga qaadaa $ 200. $ 75 ee khidmadani waa khidmad diiwaangelin aan la soo celin karin. $ 125 ee soo hartay waa dhigaal daryeel oo lagu dabaqi doono biilkaaga bilaha ugu horreeya deyn ahaan.
Qoysasku way ka saari karaan qandaraaskooda oo waxay heli karaan $ 125 deebaaji ah oo daryeel ah haddii ay kansal gaaraan qandaraaskooda la ansixiyay ugu dambeyn Talaadada, Abriil 7 illaa 11:59 pm
Qoysasku way ka saari karaan qandaraaskooda oo waxay heli karaan qayb ahaan lacag celin loogu talagalay deebaajiga si loogu daryeelo $ 75 haddii ay ka noqdaan heshiiskooda la ansaxiyay ugu dambayn Talaadada, Juun 16 illaa 11:59 pm
Qoysaska ka baxaya qandaraaskooda wixii ka dambeeya Talaadada, Juun 16 waxay waayi doonaan dhammaan $ 125 dhigaalka ah ee daryeelka.
Minnetonka sahmiyeyaashu ma bixiyaan gargaar lacageed. Si kastaba ha noqotee, degmada aad ku nooshahay waxay siisaa kaalmo dhaqaale oo joogto ah kuwa u qalma. Fadlan kala xiriir xafiiska Baadhayaasha 952-401-6838 wixii macluumaad dheeraad ah.
Minnetonka Junior Explorers ma bixiso kaalmo dhaqaale. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira gargaar dhaqaale oo joogto ah oo loo maro degmadaada kuwa u qalma. Fadlan kala xiriir xafiiska Baadhayaasha 952-401-6838 wixii macluumaad dheeraad ah.
Khidmadaha waxaa lagaa qaadayaa iyadoo lagu saleynayo maalmaha iyo qaybaha barnaamijka ee aad isdiiwaangalisay, ee aan lagu soo xaadirin (ka eeg cudurro dabadheeraad ah). Maheli doontid dhibco imaatinka ama soo qaadashada goor hore, ama marka carruurtu ka baxaan Naadiga Baadhayaasha ee Junior si ay uga qaybgalaan nashaadaadka kale.
Email ayaa la soo diri doonaa (bil kasta oo adeegga ka dib) markii qaansheegtadu ay diyaar u yihiin in laga daawado khadka tooska ah. Khidmadaha billaha ah waxaa lagu soo dallacayaa Visa / MasterCard / Discover / AmEx ama koontada hubinta / keydinta ee aan ku hayno faylka. Khidmadaha ayaa laga shaqeyn doonaa 15-ka bil kasta.
Lacag $ 15 ah ayaa lagu dari doonaa koontadaada haddii habkaaga lacag bixinta loo diido sabab kasta ha noqotee. Fadlan ogeysii biilasha iyo diiwaangelinta ama ku cusbooneysii koontadaada khadka tooska ah haddii ay jiraan wax isbeddelo ah koontadaada. Xisaabaadkii hore ee lagugu lahaa waxaa loo diri doonaa aruurinta waxaana laga yaabaa inay ku kacdo lacag.
Soo koobidyada bixinta sanadka dhammaadka waxaa laga heli karaa khadka tooska ah. Lambarkayaga Aqoonsiga Canshuuraha Federaalka waa 41-6001402. Lambarkan waa nambarka aad u baahan tahay si aad u buuxiso foomamka kharashka daryeelka carruurta ah.
Haddii aad ka diiwaangashan tahay loo-shaqeeyahaaga Qorshaha Flex Benefit Plan, foomamka ayaa la saxeexi doonaa oo keliya marka lacag-bixinta la helo ka dib. Fadlan la xiriir Biilasha iyo Diiwaangelinta haddii aad qabtid wax su'aalo ah.
Baadhayaasha da'da yar ma bixiyaan deeqo waxbarasho. Caawinaada maaliyadeed waxaa heli kara qoysaska u qalma iyada oo loo marayo degmada aad ku nooshahay. Fadlan la xiriir Waaxda Diiwaangelinta Basaasayaasha iyo Biilinta lambarka 952-401-6838 wixii macluumaad dheeraad ah.
Qoysasku waxay samayn karaan lacag-bixin wakhti kasta oo ay ku leeyihiin Xisaab-bixiyahooda Yaryar.
Ka gal koontadaada Eleyo https://minnetonka.ce.eleyo.com . Fadlan ogow: Eleyo waxay sida ugu fiican u shaqeysaa markaad isticmaaleyso biraawsarka Google Chrome.
Xisaabaadkaaga hoostiisa, xulo xisaabtaada Xannaaneeyeyaasha Xannaanada Ilmaha ee hadda jira.
Hoos u dhig Qaansheegadka Ugu Dambeeya, xulo Bixi.
Qoysaska sahamiyeyaashu waxay gali karaan akoonkooda Eleyo wakhti kasta oo ay ku cusboonaysiin karaan lacag bixinta otomaatigooda faylka.
Gal Akoonkaaga Eleyo ee ah http://minnetonka.ce.eleyo.com . Fadlan ogow: Eleyo waxay sida ugu fiican u shaqeysaa markaad isticmaaleyso biraawsarka Google Chrome.
Dhinaca kore ee midig, dooro Baadh Dhamaan Barnaamijyada.
Xulo Arag Dashboorkaaga dhinaca midig ee kore.
Boggaaga koontada, hoos ugu rog Lacag-bixinta otomaatiga ah.
Xullo Xulo Qaab Lacag Bixin Kala Duwan.
Xullo Kudar Lacag Bixin Lacageed, gali macluumaadkaaga, oo xulo Kaydinta Habka Bixinta.
Xulo habka lacag bixinta cusub ee keydka ah dhanka bidix oo xulo Isticmaal Habka Lacag-Xulista Xullan.
Haddii ilmahaagu dugsiga ka maqnaan doono muddo dheer; fadlan ogeysii Biilka iyo Diiwaangelinta Baarayaasha sida ugu dhakhsaha badan (952-401-6838) si aad u codsato in wax laga beddelo biilkaaga bilaha ah ee Biyo-baarayaasha. Sahamiyayaashu waxay sii wadaan inay shaqeeyaan dhammaan qeybaha iyo boggaga. Sidaa darteed, haddii ilmahaagu uga maqnaado barnaamijka cudur ama karantiil darteed, waxaan u baahan nahay lacag bixin sida soo socota:
1 illaa 4 maalmood oo isku xigta ayaa seegay Baadhayaasha - waalidiinta ayaa mas'uul ka noqon doona dhaqaalaha 100% ee khidmadaha maalinlaha ah
Haddii 5 ama in ka badan oo maalmood oo isku xigta la seego Basaasiinta Yaryar:
Maalmaha 1 ilaa 4 waalid waxay 100% mas'uul ka noqon doonaan xagga dhaqaalaha
Maalinta 5 iyo wixii ka dambeeya waalidiinta ayaa mas'uul ka noqon doona dhaqaalaha 50% ee khidmadaha maalinlaha ah
Haddii cunugaada uusan ka qeyb galeynin barnaamijka sababo la xiriira balan balan ah, ama maqnaansho kale oo la qorsheeyey, fadlan wac nambarka bartaada hoose oo fariin uga tag Fadlan xusuusnow inaad wacdid Baadhayaasha Yaryar kahor waqtigiisa / imaatinkeeda caadiga ah.
Jirro ama Degdeg ah
Haddii ilmahaagu bukoodo inta uu ku jiro Baadhayaasha, waa lagaala soo xiriiri doonaa waxaana lagaa codsan doonaa inaad ku soo qaadatid hal saac gudahood. Waxaan isku dayi doonaa inaan cunugaaga siino goob degan oo uu ku nasto ilaa aad ka imaaneyso. Siyaasadda degmada dugsiga waxay u baahan tahay in carruurtu aysan lahayn qandho, matag ama shuban muddo 24 saacadood ah ka hor inta aysan soo noqon. Fadlan nala soo xiriir haddii ilmahaaga laga helo cudur la is qaadsiiyo si aan dhammaan qoysaska uga digno in ilmahoodu soo gaadhay.
Haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah, waalidiinta ayaa lagu wargelin doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Haddii waalidiinta aan lala xiriiri karin, waxaan wici doonnaa qofka aad tilmaantay si aan u wacno. Haddii loo baahdo, carruurta waxaa u qaadi doona isbitaalka Methodist qeybta gargaarka degdegga ah ee degaanka si loogu daweeyo. Ilmaha waxaa lagu qaadi doonaa waalidka qarashkiisa. Carruurta soo gaarto dhaawacyo fudud waxaa la siin doonaa gargaarka degdegga ah waalidiintana waa la ogeysiin doonaa. Dhammaan shaqaalaha waxaa loo tababaray hababka gargaarka degdegga ah ee degdegga ah.
Fasaxyada iyo Qorshayaasha kale
Haddii aad ogtahay in ilmahaagu uu ku maqnaan doono fasax, taariikh ciyaar, uu leeyahay ballan dhakhtar, ama uu maqnaan doono sabab kasta ha noqotee, fadlan ogeysii kormeeraha goobta Baadhayaasha taariikhda ay isaga / isagu maqnaan doonaan. Ma jirto wax dhibco ah oo la waayo maalmo si joogto ah loo qorsheeyey oo ah Naadiga Baadhayaasha. Si kastaba ha noqotee, ma waayi doontid khidmadda $ 10 dheeraad ah ee raadinta ilmaha.
Qoysaska Junior Explorers waxay ka gali karaan koontadooda Eleyo wakhti kasta oo ay soo dejisan karaan qaansheegtadii hore. Haddii aad u baahan tahay saxiixyo Qorshooyinka Lacag-celinta, fadlan la xiriir xafiiska Baadhayaasha 952-401-6841.
Sida loo eego loona soo dejiyo qaansheegta:
Gal akoonkaaga Eleyo oo ah https://minnetonka.ce.eleyo.com . Fadlan Ogow: Eleyo waxay sida ugu fiican u shaqeysaa markaad isticmaaleyso biraawsarka Google Chrome.
Baadh Dhamaan Barnaamijyada
Xullo Ku Eeg Dashboorkaaga geeska midig ee kore
Xisaabtaada, hoosta ka xulo koontada Daryeelka Ilmaha ee Sahamiyayaal.
Hoos yimaada Maareynta Koontada, ka xulo Arag hoostiisa Qaansheegadka Ugu Dambeeya. Halkaas waxaad ka arki kartaa qaansheegtadii hore oo waad daabacan kartaa. Waxaad ku arki doontaa Aqoonsiga Canshuurta qaansheegta la soo dejiyey.
Qoysaska Junior Explorers waxay ka gali karaan koontadooda Eleyo wakhti kasta oo ay soo dejisan karaan bayaanada dhamaadka sanadka.
Nidaamka loo fiirsado / loo daabaco Soo-Bixinta Dhammaadka Sannadka
Ka gal koontadaada Eleyo https://minnetonka.ce.eleyo.com
Xulo Baadh Dhamaan Barnaamijyada
Xullo Arag Dashboardkaaga
Xisaabtaada, hoosta ka xulo koontada Daryeelka Ilmaha ee Sahamiyayaal
Hoos maareynta Xisaabaadka, xulo Download Canshuurta Macluumaadka
Soo dejiso, arag iyo / ama daabac bayaankaaga dhammaadka sannadka. Lambarka Aqoonsiga Canshuuraha ee Federaalka wuxuu ku jiri doonaa bayaankaaga dhammaadka sannadka.
Siyaasadda Xanuunsan ee La Kordhiyay
Waxaan raaci doonnaa hagida MDH iyo hirgelinta Tilmaamaha Ka-saarista iyadoo lala kaashanayo dhismo dugsi kasta.
Ardayda ayaa loo diri doonaa guriga ama waa loo diidi doonaa inay soo galaan haddii ay soo bandhigaan mid ka mid ah kuwan soo socda:
Qufac cusub oo bilow ah ama neefsashada oo gaaban ayaga keligood
Uguyaraan 2 ka mid ah kuwan soosocda: qandho (100.4ºF ama ka sareeya), dhaxan, murqo xanuun, dhuun xanuun, daal, ciriiriga, luminta dareenka urta ama dhadhanka, ama calaamadaha caloosha ee shuban, matag, ama lallabo.
Ardayda muujineysa astaamo kasta oo aan helin baaritaan kale (ie, dhuun xanuun, norovirus) oo sharraxaya astaamaha, ama caddeyn u sameynaya bixiye daryeel caafimaad in astaamaha ay ku xiran yihiin xaalad horay u jirtay waxay u baahan doonaan:
Joog guriga ugu yaraan 10 maalmood tan iyo markii astaamuhu ugu horreeyey u muuqdeen IYO illaa aan qandho lahayn ugu yaraan 24 saacadood daawo la'aan IYO hagaajinta calaamadaha.
Walaalaha iyo xubnaha qoysku waa inay guriga joogaan 14 maalmood.
Halkee ku yaalliin Jilayaal Yaryar?
Junior Explorers ma yahay barnaamij daryeel cunug oo la aqoonsan yahay?
Sidee macalimiinta Junior Explorers ay ilala soo xiriiri doonaan xagga horumarka ilmahayga?
Carruurta Yaryarada Baadhayaasha ah ma seexan doonaan?
Ilmaha yar yar ee sahamiyayaal ah ma heli doonaan caawimaad musqusha, haddii loo baahdo?
Ilmahayga Yaryari Ilmahaygu ma raaci karaa baska tegista iyo ka-noqoshada dugsiga?
Sidee buu barnaamijka qadada ugu shaqeeyaa ilmahayga Yaryar Baadhayaasha?
Ilmahaygu cunno ma ku heli doonaa Baadhayaasha Junior?
Sidee Juun-baarayaasha ula macaamilaan carruurta leh xasaasiyadda cuntada?
Sahamiyayaal Yaryar miyey fadhiyaan maalmaha aan dugsiga ahayn?
Ma u baahanahay inaan ogeysiiyo Baadhayaasha Yaryar haddii ilmahaygu ka maqnaan doono maalin Joogtada Jilayaasha sida caadiga ah loo qorsheeyey?
Muxuu yahay nidaamkaaga amniga ee soo qaadista waalidka / ilmaha?
Kawaran haddii aanan awoodin inaan soo qaado ilmahayga illaa 6 galabnimo?
Sideen ugu oggolaadaa dadka cusub inay ka soo qaadaan ilmahayga Baarayaasha?
Inta lagu jiro sanad dugsiyeedka, Sahamiyayaal Yaryar waxay ku yaalliin Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka oo ku taal 4584 Vine Hill Road ee ku taal Excelsior.
Junior Explorers ayaa la gudoonsiiyay Qiimeynta Waalidka ee Afar Waalid .
Jadwalka taariikhda iyo joornaalada waxaa emayl loogu diri doonaa qoysaska, laguna dhajin doonaa fasalka dhexdiisa laguna soo dhejin doonaa websaydhka. Shirarka lala yeelanayo macallimiinta ilmahaaga waxaa la qabtaa deyrta iyo gu'ga waxayna ku siinayaan fursado aad ku weydiiso su'aalo oo aad wax badan uga ogaato koritaanka bulshada iyo shucuurta ilmahaaga. Macallimiintu waxay cusbooneysiiyaan waalidiinta maalintii oo dhan iyagoo isticmaalaya Seesaw. Sahamiyayaal Yaryar ayaa adeegsada Qiimeynta Manhajka Hal-abuurka ah .
Maalinteennu waxay ku jiri doontaa nasasho jir ah 30-daqiiqo maalin kasta qadada ka dib. Carruurtu way sii seexan karaan waqti dheer, haddii loo baahdo.
Carruurta waa in loo tababaraa musqusha si ay isaga diiwaangeliyaan Junior Explorers. Waxaan u qeexnaa musqusha loo tababaray inay leedahay awood ay ku ogeysiiso qof weyn inuu u baahan yahay inuu isticmaalo musqusha, jiidayo surwaal kor / hoos, madax banaanaansho iyo nadiifinta gacmaha musqusha kadib. Shaqaalaheena ayaa dhiiri galin doona caruurta hadii loo baahdo. Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay keenaan dhar beddel ah haddii ay shilal dhacaan.
Gaadiidka degmada looma hayo carruurta Baadhayaasha Yaryar.
Carruurtu waa inay keenaan qado bac ah. Qado iskuul lama bixiyo.
Cunto fudud oo quraac ah ayaa la siiyaa Sahamiyayaal Yaryar.
Cunnooyinka fudud ee dugsiga ka dib waxaa bixiya Adeegyada Nafaqada. Tan waxaa ka mid noqon kara miraha ama casiirka miraha, buskudka, ulaha jiiska, ulaha qudaarta, iwm.
Liiska cuntada fudud ayaa lagu dhajiyay websaydhka Adeegyada Nafaqada waxaana lagu dhajiyaa goob kasta oo Sahamiyayaal ah.
Haddii ilmahaagu qabo xasaasiyad cunto, waalidku waa inay keenaan Qorshaha Waxqabadka Xasaasiyadda ilmahaaga, foomka Siidaynta Caafimaad iyo daawooyinkooda goobta maalinta ugu horreysa. Sahamiyayaal Yaryari waxay adeegsadaan Adeegyada Nafaqada qaar ka mid ah cuntada fudud ee la farsameeyayna waxaa ku jiri kara wasakheynta iskutallaabta goobta wax soo saarka. Fadlan wac Adeegyada Nafaqada si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xulashooyinka fudud ee Sahmiyeyaasha ama ku dhiirrigeli ilmahaaga inuu had iyo jeer doorto ikhtiyaarka miraha cusub.
Junior Explorers waxaa la siiyaa inta badan maalmaha dugsiga la sii daayo / dugsiga barbaarinta laga bilaabo 6:30 subaxnimo ilaa 6 galabnimo Maalmahan waxay bixiyaan nashaadaadyo kala duwan iyo safarro shaqo. Maalmahan waxay leeyihiin diiwaangelin gooni ah oo lagu waafajiyo baahida jadwalka qoysaska shaqsiyeed. Maalin kasta oo aan Dugsi ahayn ayaa laga saaraa jadwalka caadiga ah ee Jilayaasha Yaryar ee loogu talagalay ujeedooyinka biilasha iyo qoysaska isdiiwaangaliya Maalmaha Aan Dugsiga Ahayn waxaa lagu soo dallici doonaa sicirka maalin-dugsiyeedka.
Sida loo diiwaan geliyo maalmaha aan dugsiga ahayn ee Eleyo:
Gal akoonkaaga Eleyo ee ah https://minnetonka.ce.eleyo.com . Fadlan ogow: Eleyo waxay ugu shaqeysaa Google Browser Google Chrome
Xulo Xannaaneeyayaasha Ilmaha Baadhayaasha
Xullo Diiwaangelinta Maalmaha Aan Dugsiga Ahayn
Xulo Ilmaha Xaadiraya oo guji Sii wad
Xulo sanad dugsiyeedka (hoosta Dooro Xilliga) ee aad isdiiwaangelineyso oo guji sii wad
Xulo Maalmahaaga Aan Dugsiga Ahayn ama Maalinta Dambe ee Bilowga / Soosaarida Hore oo guji sii wad. Fadlan la soco: Eleyo waxay tilmaamaysaa inay tahay maalin aan iskuul ahayn ama Billowga Hore / Maalinta Sii-daynta Hore ee shaashadda xigta.
Ka dooro Goobta Ilmahaagu Ka Qaybgalo Baadhayaasha oo ku Yaal Saldhig Maalinle ah liiska xulashada hoos ku qoran taariikh kasta.
Sida loo xaqiijiyo / looga saaro maalmaha aan dugsiga ahayn:
Xullo Qandaraasyada Hadda iyo Kuwa Soo Socda oo guji heshiiska ilmahaaga
Hoos kadhageyso Maalmaha Aan Iskuulka Aheyn
Inta ay wali sugayaan waa laga saari karaa. Haddii la aqbalay, ma arki doontid ikhtiyaar “Ka saar” oo waxaad u baahan doontaa inaad wacdo 952-401-6841 si looga saaro inta ay tahay ka hor inta aan la gaarin wakhtiga la joojinayo.
Fadlan ogow: Lagama qaadi doono sicirka caadiga ah maalin kasta oo ardayga si joogto ah loogu qoondeeyay inuu xaadiro taas oo waliba ah maalin aan dugsi ahayn. Nidaamku ma qaadan karo wax ka badan 1 sicirka maalinlaha ah sicirka maalinta aan iskuulku dhaafinayna heerka caadiga ah. Sidaa darteed, ardaygu waa inuu isdiiwaangaliyo maalintaas si uu uga qayb galo (oo uu ku dalaco sicirka).
SOO DAjiso 2021-2022 MACLUUMAADKA MAALINTA AQOONSIGA
(WAXA KU JIRA WAKHTIYADA)
Haddii ilmahaagu uusan ka qayb geli doonin barnaamijka sababo la xiriira ballanta loo qabtay awgeed, ama maqnaanshaha kale ee la qorsheeyey, fadlan wac lambarka boggaaga Junior Explorers ee hoos ku yaal oo fariin uga tag. Fadlan sidoo kale u wac Saanqaadeyaasha Yaryar kahor waqtigiisa / imaatinkeeda caadiga ah.
Lambarka Telefoonka Sahamiyayaasha Yaryar: 952-401-6825
Cudur daba dheeraaday
Haddii aad ogtahay in ilmahaagu jiran yahay dhawr maalmood; fadlan ogeysii kormeeraha goobta iyo Biilinta iyo Diiwaangelinta sida ugu dhakhsaha badan. Haddii ilmuhu uga maqnaado barnaamijka cudur ama shil awgood, waxaan u baahan nahay lacag bixin sida soo socota:
Hal maalin ama laba maalmood oo isku xiga = sicirka waxbarashada oo buuxa
Saddex maalmood oo isku xigta = 50% qiimaha maalinlaha
Afar maalmood ama ka badan oo isku xigta = 25% qiimaha maalinlaha ah
Booska ilmahaaga ayaa la hayaa. Iswaafajinta koontadu waxay ka muuqan doontaa qaansheegta bilaha ah.
Haddii aad ogtahay in ilmahaagu uu ku maqnaan doono fasax, taariikh ciyaar, uu leeyahay ballan dhakhtar, ama uu ku maqnaan doono sabab kasta ha noqotee, fadlan ogeysii kormeeraha goobtaada Junior Explorers taariikhda ay / isagu maqnaan doonaan. Ma jirto wax dhibco ah oo lagu maqnaado maalmaha jadwalka jadwalka loo yaqaan 'Junior Explorers'.
Iska Dhig & Soo Qaad
Waxaad heli doontaa 4 xaashi oo rubuc warqad ah oo midabbo lagu calaamadeeyay oo ay ku qoran yihiin magaca ilmahaaga maalinta ugu horreysa ee barnaamijka. Midabaynta midabkani waxay ku saleysan tahay kooxda fasalka ilmahaaga. Fadlan mid ka mid ah ku dheji daaqadaada hore dhinaca rakaabka ee gaarigaaga oo kuwa kale u qaybi shakhsiyaadka loo idmay inay ka degaan oo ka qaadaan ilmahaaga. Dadka qaangaarka ah ee dhacaya iyo qaadista waxaa looga baahan yahay inay xirtaan maaskaro marka ay la macaamilayaan shaqaalaha. Waxaan ka hubin doonnaa aqoonsi wixii qaangaar ah ee aan horay ula macaamilin ama aanan aqoonsan.
Ka soo deg
U soo bax xagga hore ee dugsiga inta u dhexeysa 6:30 subaxnimo iyo waqtiga bilowga dugsiga oo Kormeeraha Goobta ayaa ku soo bixi doona si uu kuguula kulmo gaarigaaga.
Kormeeraha ayaa ku qaadi doona heerkulka ardayga gaariga wuxuuna fiirin doonaa ardayga isticmaalka iPad-ka.
Haddii ardaygu uusan iska furi karin kursiga gaariga, waalidku wuxuu gacan ka geysan doonaa sidii ardayga looga dejin lahaa gaariga.
Kormeeraha goobta ayaa Walkie ugu tagi doona qof shaqaale ah si uu ardayga u geeyo barnaamjigooda.
Ardaydu waxay ku sugi doonaan banaanka iridda weyn ilaa xubin shaqaale ah uu diyaar u yahay inuu ku dhex lugeeyo gudaha.
U soo jiid xagga hore ee dugsiga oo hubi inaad calaamaddaada meesha ku dhejiso daaqadda hore. Kormeeraha Goobtu wuxuu ku socon doonaa gaariga wuxuuna hadal ahaan ku xaqiijin doonaa ardayga weyn ee halkaas jooga inuu soo qaado. Haddii aysan la kulmin qofka soo qaadaya ardayga, waxay weydiinayaan qofka weyn inuu tuso aqoonsi.
Kormeeraha Goobta ayaa ku lugeyn doona ardayga la soo bixidiisa wuxuuna u gudbin doonaa wixii fariimo ah ama waraaqo ah ee loo baahan yahay in loo gudbiyo qofka idman ee qaadaya ardayga.
Kormeeraha ayaa daawan doona ilaa ardaygu si badbaado leh ugu dhex jiro gaariga, qofka idman ee soo qaadaya ardayga wuxuu u baahan doonaa inuu ka caawiyo arday u baahan caawinaad kursiga gaariga.
Soo qaadis dambe
Sahamiyayaashu waxay xirmayaan 6-da maqribnimo Dhammaan carruurta waa in la soo qaataa ugu dambeyn 6 pm sida ku cad waqtiga iPad-ka ee miiska bixitaanka. Haddii xaalad deg-deg ahi dib kuu dhigto oo aad ka habsaanto soo qaadista ilmahaaga, qorshe u samee qof aad u dooratay inuu yahay qof ALTERNATE PICK UP ah oo ilmahaaga ku soo qaadaya waqtigiisa, isla markaana u wac shaqaalaha barnaamijka isla markiiba.
Haddii ay dhacdo in ilmahaagu weli ku jiro barnaamijka ka dib xidhitaanka oo aan wax war ah kaa maqlin, waxaan qaadi doonaa tallaabooyinka soo socda (si isku xigxig ah):
Isku day inaad kula soo xiriirto gurigaaga, shaqadaada ama lambarka taleefanka gacanta.
Wac dadka aad qortay ee aad u fasaxday inay soo qaadaan ilmahaaga.
Haddii aad ka daahdo wax ka badan 30 daqiiqo, booliska ayaa lala soo xiriiri doonaa si laguu caawiyo.
Lacagta soo daahay ee ah $ 10 ayaa laga qaadayaa shantii daqiiqoba (ama qayb ka mid ah) oo waalidku ku daahayo soo qaadashada ilmo. Ka dib markii saddexaad, adeegyada daryeelka carruurta waa la joojin karaa ama la joojin karaa.
Sahamiyayaal Yaryari ah ayaa xirmaya 6-da maqribnimo Dhammaan carruurta waa in la soo qaataa ugu dambeyn 6 pm sida ku cad waqtiga iPad-ka ee miiska laga baxo Haddii xaalad deg-deg ahi dib kuu dhigto oo aad ka habsaanto soo qaadista ilmahaaga, qorshe u samee qof aad u dooratay inuu yahay Qof Qaadista Idman si uu ilmahaaga u soo qaado waqtigiisa, oo isla markiiba wac shaqaalaha barnaamijka.
Lacagta soo daahay ee ah $ 10 ayaa laga qaadayaa shantii daqiiqoba (ama qayb ka mid ah) oo waalidku ku daahayo soo qaadashada ilmo. Ku celcelinta mararka qaarkood waxay sababi kartaa in la joojiyo adeegyada daryeelka carruurta.
1.Soo gal koontadaada Eleyo oo ah https://minnetonka.ce.eleyo.com
2.Baadh dhammaan Barnaamijyada
3.Xulo Xannaaneeyeyaasha Daryeelka Carruurta
4.Xulo Maaraynta Xisaabaadka
5.Sooro Kuuliyadaha La Fasaxay ee La Maamulay
6 Xulo Dooro Qaadista Idman
7.Save Qaadista Oggolaanshaha si aad u keydiso macluumaadkooda
8.Si aad uga saarto Qaadista Idman, xulo badhanka guduudan ee ku yaal dhinaca midig ee macluumaadkooda.